Ezikiel 9 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
9 O wee jiri oké olu kpọọ òkù ná ntị m, sị: “Meenụ ka ndị na-ebibi obodo a bịa nso, onye nke ọ bụla jiri ngwá ọgụ ọ ga-eji bibie obodo a!”
2 Ma, lee! ndị ikom isii si n’ebe ọnụ ụzọ ámá mgbago+ nke chere ihu n’ebe ugwu na-abịa, onye nke ọ bụla ji ngwá ọgụ o ji akụgbu mmadụ; e nwekwara otu nwoke so ha nke yi uwe linin,+ ọ fanyekwara mpi ink nke odeakwụkwọ n’úkwù. Ha wee bata guzoro n’akụkụ ebe ịchụàjà e ji ọla kọpa rụọ.+
3 Ma e wepụrụ ebube Chineke Izrel+ n’elu cherọb+ ọ na-adịbu wee wega ya n’ọnụ ụzọ ụlọ ahụ,+ o wee malite ịkpọku nwoke ahụ yi uwe linin,+ onye fanyere mpi ink nke odeakwụkwọ n’úkwù.
4 Jehova wee gaa n’ihu ịsị ya: “Gagharịa n’ime obodo a, n’ime Jeruselem, kaa ndị na-eze ume ma na-asụ ude+ n’ihi ihe arụ niile a na-eme n’ime ya+ akara n’egedege ihu.”
5 Ọ gwara ndị nke ọzọ ná ntị m, sị: “Soronụ ya n’azụ gagharịa n’ime obodo a ma gbuo ndị mmadụ. Anya unu emela ebere, unu enwekwala ọmịiko.+
6 Gbuonụ agadi, nwa okorobịa na nwa agbọghọ na-amaghị nwoke na nwatakịrị na ndị inyom,+ gbuchaanụ ha. Ma, unu agala onye ọ bụla nwere akara ahụ nso,+ unu ga-amalitekwa n’ebe nsọ m.”+ Ha wee malite ná ndị agadi, bụ́ ndị nọ n’ihu ụlọ ahụ.+
7 Ọ gwakwara ha, sị: “Merụọnụ ụlọ a, meekwanụ ka ogige ya jupụta ná ndị e gburu egbu.+ Gaanụ!” Ha wee gaa gbuo ndị nọ n’obodo ahụ.
8 O wee ruo na, ka ha nọ na-egbu ndị mmadụ, mụ onwe m wee fọdụ, m wee gbuo ikpere n’ala, kpudo ihu n’ala,+ tiekwa mkpu, sị: “Ewoo,+ Ọkaakaa Onyenwe anyị Jehova! Ị̀ na-ebibi ndị niile fọdụrụ n’Izrel mgbe ị na-awụkwasị Jeruselem ọnụma gị?”+
9 O wee sị m: “Njehie ụlọ Izrel na Juda+ dị nnọọ ukwuu,+ ala ha jupụtara n’ịwụfu ọbara,+ obodo ha jupụtakwara n’ihe gbagọrọ agbagọ;+ n’ihi na ha asịwo, ‘Jehova ahapụwo ala a,+ Jehova adịghị ahụ anyị.’+
10 Ma anya m agaghị eme ebere,+ agaghịkwa m enwe ọmịiko.+ M ga-eme ka ha jiri isi ha buru ihe ha metara.”+
11 Ma, lee! nwoke ahụ nke yi uwe linin, onye fanyere mpi ink n’úkwù, nọ na-akọ otú o si jee, sị: “Emewo m nnọọ dị ka i nyere m n’iwu.”+